Hubachiisaa: Gabaabduufi Murteessituu Hoogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa!! »
Hubachiisaa: Gabaabduufi Murteessituu Hoogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa!!
​Hubachiisa: Gabaabduufi Murteessituu Hoogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa
#OromoRevolution Alaabaa ABO lafa kaa’aan lafa nama hin keessisu, qabadhaan nama hin qabachiisu Kaayyoofi Akeekaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ilaalcha Siyaasaa (Ideology) Uummatni Oromoo Waliigalatti hordofuufi itti amanutu nama qabachiisa!!.
Waan yeroon isaa geenyaan dhufe eenyu iyyuu boodatti hin deebisu. We are proud of our Qeerroos and their stand against the dictatorship of the Ethiopian government. JABAADHAA!!!